Ny toerana fisakafoanana ivelany 12 tsara indrindra any Kildare - IntoKildare
Vonona handray anao tsara ireo trano fisakafoanana, kafe, fisotroana ary mpamokatra sakafo any Kildare. Ohatra iray avy amin'ny fisafidianana ireo sakafo fisakafoanana ety ivelany natambatra izay hanome anao hanandrana izay atolotra any Kildare amin'ity fahavaratra ity.
Ankafizo ny sakafo atoandro na ny sakafo hariva avy amin'ny menio be dia be ao amin'ny terasin'ny zaridaina mahafinaritra ao amin'ny Silken Thomas, ao amin'ny tanànan'i Kildare. Ny toerana fisakafoanana dia mandritra ny adiny 2 miaraka amin'ny faritra iray hankafizanao amin'ny alàlan'ny labiera alohan'ny alikaola na alefa amin'ny sakafo hariva. Kitiho ny boky, raha tsindrio Eto na telefaona 045 522232.
Swans on the Green, trano fisakafoanana misy kafe sy sakafom-pianakaviana eo akaiky eo akaikin'ny faritra amoron-dranomasina tsara tarehy, dia misokatra ho an'ny fisakafoanana an-kalamanjana hatramin'ny maraina ka hatramin'ny alina manolotra sakafo maraina sy sakafo atoandro ary sakafo matsiro miaraka amin'ny dite na kafe misy anao. Tsy mila famandrihana.
2021 05 24 Vaovao 71024768 I1
Any amin'ny sisin'ny Curragh sy amoron'ny renirano Liffey, Fallons of Kilcullen, hisokatra ny talata ka hatramin'ny alahady hisakafoanana antoandro sy hisakafoanana, alao ny latabatrao Eto.
The Palmer ao amin'ny The K Club
Vaovao sy kanto ankehitriny nefa manome toky fa mahazatra, Ilay Palmer ao amin'ny The K Club dia manome sakafo maraina mamirapiratra sy maraina, sakafo atoandro ary sakafo hariva hariva tsy tapaka hatramin'ny farany kaomandy farany. Ny terrain glazed an'ny Palmer dia samy manana tafo azo esorina sy takelaka fitaratra mihetsiketsika mba hahazoanao tombony hatrany amin'ny tsara indrindra amin'ny toetrandro, ary koa andiana lavaka famonoana afo ho an'ny vahiny hankafy fisotroana alohan'ny sakafo hariva na lakandranon'alina eo ankilan'ny hariva nianjera tamin'ny trano. Ny fifantohana ao amin'ny The Palmer dia ny sakafo fampiononana maoderina, manomboka amin'ny lovia mahazatra ka hatramin'ny mofo fisaka, mizara lovia, salady ary trondro vaovao, sakafo lehibe avy amin'ny grill ary lafiny malala-tanana sy matsiro. Ny Palmer dia mandray fomba mahavariana sy mahafa-po amin'ny famokarana lovia vokarin'ny vokatra ao anaty tontolo mirentana nefa tsy ara-potoana.
Napetraka eo afovoan'ny ambanivohitra Kildare manan-tantara 550 hektara, Moyvalley Hotel & Golf Resort no toerana mety indrindra hisakafoanana miala sasatra hahafahanao mahita namana manodidina ny toerana manaitra. Misokatra hisakafo atoandro sy hariva, telefaona (0) 46 954 8000 mba hamandrihana.
Efitra dite Victoria 2
Ankafizo mofomamy, kafe na sakafo atoandro ao amin'ny tokotanin'ny masoandro Efitra dite Victoria amin'ny Straffan. Sokafy ny talata hatramin'ny sabotsy, tsy mila famandrihana.
Mialà sasatra ary ankafizo ny menio iray izay manolotra fifangaroan-tsakafo sy sakafo eropeana ao amin'ny The Oak Bar Terrace ao amin'ny Westgrove Hotel ao amin'ny Clane. Manompoa sakafo atoandro manomboka amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 4 hariva ary fisakafoanana amin'ny 5 hariva ka hatramin'ny 8 hariva. Ny famandrihana fisakafoanana rehetra dia tokony hatao mialoha amin'ny alàlan'ny telefaona 045 989900
Lily & Wild manolora safidy sandwich, salady, zava-pisotro misy dite sy kafe rehetra natolotra tamin'ny kamiaon-dry zareo, miaraka amin'ny fipetrahana, ao amin'ny Naas Racecourse. Azo alaina sary an-tsary koa ireo pikniketa takeaway hankany amin'ny hazakaza-tsoavaly na lavitra kokoa. mba Eto.
Mitete ando 20201223 011455 768x576
The Dew Drop Gastropub ao amin'ny tanànan'i Kill dia misokatra Alarobia ka hatramin'ny Alahady hisakafoanana sy sakafo hariva. Ankafizo ireo vokatra novokarina avy eto an-toerana, anisan'izany ny labiera asa-tanana avy any amin'ny faritra midadasika. Fandriho ny latabatra terrasanao Eto.
Safidy sakafo atoandro sy antoandro ary sakafo hariva no miandry ao Mpitsara Roy Beans, Newbridge. Manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 11.30:XNUMX alina Alatsinainy ka hatramin'ny Alahady, famandriho ny latabatrao Eto.
Saddlers Bar & Bistro ao amin'ny Keadeen Hotel any Newbridge dia misokatra hisakafo atoandro manomboka amin'ny 12.30 ora sy sasany ka hatramin'ny 2.30:5 hariva (sakafo voafetra) ary ny sakafo hariva amin'ny 8.30 hariva ka hatramin'ny 12.30 ora alina. Izy ireo koa dia manolotra serivisy fisotroana bar any ivelany amin'ny XNUMX ora sy sasany hariva hatramin'ny fanakatonana ny labiera sy ny zaridaina Cocktail. Toerana voafetra hisakafoanana sy fisotroana, walk-in ihany - tsy misy famandrihana nalaina.
Ny trano fisakafoanana Gallops ao amin'ny Kildare House Hotel ao amin'ny tanànan'i Kildare, lova lova, manaova menio isan-karazany sy matsiro ho an'ny sakafo maraina, atoandro ary sakafo hariva. Fandriho ny latabatrao Eto.